तास खेल्दै अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारतास खेल्दै अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह !
तास खेल्दै अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह !
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा छोटो समयमा नै आफुलाई एउटा छुट्टै स्थानमा राख्न सफल भैसकेका धेरै कलाकारहरु छन् । तर कतिपय यस्ता कलाकारहरु पनि नेपाली सिने क्षेत्रमा छन कि उनीहरु आफ्नो कुन कामबाट दर्शकहरु सन्तुष्ट छन् ? मैले के गर्न हुन्छ, के हुदैन ? मैले के गरिरहेको छु ? र के गर्नु पर्छ जस्ता स-साना कुरामा बिचार पुर्याएको पाइदैन ।
जसले गर्दा सामाजिक संजालमा विभिन्न वि’वादहरु र आ’लोचनाको सि’कार हुने गर्दछन । हामी कुरा गर्दैछौ फिल्म क्षेत्रबाट छोटो समयमा आफुलाई एउटा ब्रान्ड नाम बनाउन सफल नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको ।फिल्ममा साम्राज्ञिको कामप्रति खो’ट लगाउने त ठाउँ सायदै छैन, उनले अभिनय गरेको प्रायः फिल्ममा उनको अभिनयको ता’रिफ हुनेगर्छ, फिल्म फ्ल’प नै भएपनी ।
तर, उनको बेला बखत सामाजिक संजालमा हुने फरक उपस्थितिले वि’वा’द र आ’लो’च’नामा ता’निन्छन । पढेलेखेको नायिका भएपनी सामाजिक संजाललाई नरम रुपले लिदा वि’वा’दमा तानिन्छन । कतै प्रेमिका कारण, कतै अ’पा’च्य तस्विरका कारण त कतै सिनेक्षेत्रको बि’कृ’ती बारे बोल्दा । उनी आ’लोचनामा परिरहन्छिन ।
हालै यस्तै भएको छ । सायदै यो कुरा धेरैले नो’टिस नगरेको हुन सक्छ । तर, हामिले भने उनले ता’स खेल्दै गरेको भिडियो भेट्यौ । केहि दिन अगाडी मात्र उनले आफ्ना घरका सदस्यसंग बसेर ता’स खेलेको भिडियो सामाजिक संजाल इ’न्स्टाग्रामको स्टो’रीमा उनकी आमा नेहाले राखेकी थिइन । ठिकै छ, ता’स खेलियो ।
सामाजिक संजालमै देखाउनु कत्तिको जायज कुरा हो ? उखानै छ नि ‘नखेल्नु जु’वा र ता’स, धनको ना’स जिवनको बनिबास’ । यो कुराको थोरै पनि हे’क्का नभएको जस्तो देखियो । सरकारले पनि ता’स खेल्नु र सामाजिक संजालमा यस्ता गतिविधि गर्दा अ’बैधानिक मान्छ । नाम, दाम, ई’ज्ज त र लाखौ फ्यान क’माएका यस्ता ब्यक्तिले यो किसिमको कार्य गर्दा हेर्ने र देख्नेले चाहिँ के पाठ सिक्ने ? बिचार गर्ने पो हो कि ।